I-China Torsional shear bolt yolwakhiwo lwesinyithi somvelisi kunye noMthengisi | Isixhobo sokuvala seTailian
Umvalo we-shears ye-shears yesakhiwo sensimbi
Isakhelo sesinyithi yentsimbi luhlobo lwebholiti yamandla aphakamileyo kunye nohlobo lwenxalenye esemgangathweni. Ulwakhiwo lweebholtshi zesinyithi zisetyenziswa ikakhulu kubunjineli bobume bentsimbi ukudibanisa amanqaku oxhulumaniso lweepleyiti zentsimbi. Ulwakhiwo lweentsimbi zinezixhobo zokwahlulahlula zibe ziitroli zohlobo lokucheba kunye neebhontshi ezinkulu ezinamacala amakhulu.
Isakhelo sesinyithi yentsimbi luhlobo lwebholiti yamandla aphakamileyo kunye nohlobo lwenxalenye esemgangathweni. Ulwakhiwo lweebholtshi zesinyithi zisetyenziswa ikakhulu kubunjineli bobume bentsimbi ukudibanisa amanqaku oxhulumaniso lweepleyiti zentsimbi. Ulwakhiwo lweentsimbi zinezixhobo zokwahlulahlula zibe ziitroli zohlobo lokucheba kunye neebhontshi ezinkulu ezinamacala amakhulu. Iibholiti ezinkulu ezinamacala amathandathu ezomeleleyo zeziklasi ezinamandla aphezulu kwizikere eziqhelekileyo, ngelixa uhlobo lokucheba i-torsional uhlobo lwee-bolts ezomeleleyo kukuphucula iibholiti ezinkulu ezinamacala amakhulu. Kulwakhiwo olungcono, ulwakhiwo lweebholithi zentsimbi kufuneka luqiniswe kuqala kwaye ekugqibeleni. Ukuqiniswa kokuqala kweebholtshi zesakhiwo sentsimbi, uhlobo lwefreyimu yombane okanye i-torque iiwrenche zombane ezifunekayo. Ukuqiniswa kokugqibela kweebholtshi zentsimbi kuneemfuno ezingqongqo. Ukuqiniswa kokugqibela kwentsimbi ye-shears yohlobo lwe-bolts yesinyithi kufuneka isebenzise uhlobo lwe-torsional shear isikrufu sombane, kunye nokuqiniswa kokugqibela kohlobo lwesinyithi seebholtshi zesinyithi kufuneka sisebenzise uhlobo lwe-torque utsalo lombane. Uhlobo lwe-bolt yentsimbi ye-shears yoovalo ine-bolt, i-nut, uhlobo lwe-shear ye-torsional yamandla aphezulu e-bolt yesakhiwo sentsimbi ye-bolt enamacala ama-bolt kunye ne-washer.
Egqithileyo Ukuqhuba ucingo lomsila
Okulandelayo: Umthengisi onokuthenjwa owenziwe e-China zokubopha u-Bolt Bolt kunye ne-Nut T Intloko ye-Bolt Flange Bolt Anchor Bolt U-Bolt Ukuphakamisa iliso le-Bolt Allen Bolt Stud Bolt ene-Hex Nuts kunye ne-Flat Washer
Welding ipleyiti iankile evulwa
I-nut eshushu eshushu
Amandla aphezulu e-U-bolt